Wararka - Hordhaca Shirkadda
Shandong Kunda Steel Co., Ltd. Waxay ku taal magaalada Liaocheng, gobolka Shandong, oo ah magaalo bilic leh waxaa loo caleemo saaray 'Oriental Venice'. Liaocheng oo ku taal galbeedka gobolka Shandong, 200Km South magaalada Beijing, 100Km galbeed magaalada Jinan. si deg deg ah oo loo sameeyay xarunta ugu sarreysa saadka ee Waqooyiga Shiinaha.
Kunda Steel waa hoosaad ah Laiwu Steel Mill Plant, aasaasay sanadkii 2010 oo ku hawlan wax soo saarka iyo howl-iibinta Plate Xidho Steel caabida / cimilada Steel Plate / Xoog High Carbon Steel Plate / ahama Steel / Aluminum & naxaasta iyo qeybaha kala materials.Kunda badan 15000square mitir meel bannaan, shaqaale jira 200 oo shaqaale ah, oo ay ku jiraan 12 takhasus gaar ah oo farsamo, ayaa xaqiijiyey alaab-dahab ah (Bixiye Hubiye) oo ay soo saartay shirkadda Alibaba. Waxaan sidoo kale ka gudubnay Shahaadada ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001 / CE / UL / BSI / DIN iwm si aan u xaqiijino dhamaan badeecadeena iyo adeegyadeena inay yihiin kuwa heer caalami ah. Iyada oo sumcad wanaagsan ku leh Yurub / Koonfur-bari Aasiya / Bariga Dhexe / Koonfurta Ameerika iyo Afrika, mugdeena sannadlaha ah ee dhoofinta iyo shan iyo labaatan milyan oo doolar, qiyaastii boqolkiiba afartan wadarta iibka
Iyadoo fikradda ah 'Sii wanaajinta ， Win-win iskaashiga ＂， oo ay fuliso tayo la isku halleyn karo iyo kadib adeegga adeegga iibka, Kunda wuxuu sumcad wanaagsan ka helay macaamiisha gudaha iyo dibaddaba. !
no.:0086-13306351330 telefoonka gacanta
Cinwaanka: Warshadaha Warshadaha, Magaalada Liaocheng, gobolka Shandong, Shiinaha